Optimizely Intelligence Cloud: Mashandisiro Ekushandisa Stats Injini KuA / B Kwayedza Yakapusa, Uye nekukurumidza | Martech Zone
Kana iwe uri kutsvaga kumhanya chirongwa chekuyedza kubatsira rako bhizinesi bvunzo & kudzidza, mikana uri kushandisa Optimizely Intelligence Cloud - kana iwe wakambozvitarisa. Optimizely ndechimwe chezvishandiso zvine simba mumutambo, asi senge chero chishandiso chakadai, unogona kuchishandisa zvisiri izvo kana ukasanzwisisa kuti chinoshanda sei.
Chii chinoita kuti Optimizely ive nesimba? Pakati penzvimbo yaro yakatarwa pane yakanyatso zivikanwa uye inonzwisisika manhamba enjini mune yechitatu-bato chishandiso, ichikubvumidza iwe kuti utarise zvakanyanya pakuwana kwakakosha bvunzo kurarama - pasina kuda kunetseka kuti uri kuturikira zvisizvo mhedzisiro yako.
Zvakawanda senge yechinyakare bofu kudzidza mumushonga, A / B yokuedzwa zvinongoratidzira zvakasiyana kurapa yewebsite yako kune vashandisi vakasiyana kuti uenzanise kushanda kwese kwekurapa.
Statistics dzinobva dzatibatsira kuita fungidziro nezvekuti mushonga iwoyo ungashanda sei pamusoro penguva refu.
Mazhinji maA / B ekuyedza maturusi anovimba neimwe yemhando mbiri dzehuwandu hwenongedzo: Frequentist kana Bayesian stats. Chikoro chega chega chine zvayakanakira nezvayakaipira - Frequentist nhamba dzinoda kuti saizi yekumisikidzwa igadziriswe pamberi pekumhanyisa kuyedza, uye manhamba eBayesian anonyanya kutarisira kuita sarudzo dzakanaka dzekutungamira pane kudoma chero imwe chete nhamba yekukanganisa, kupa mienzaniso miviri. Optimizely's superpower ndeyekuti ndiyo chete chishandiso pamusika nhasi kutora zvakanakisa zvepasirese kuswedera pedyo.
Mhedzisiro? Optimizely inogonesa vashandisi kumhanyisa miedzo nekukurumidza, nekuvimbika, uye nekuwedzera intuitively.
Kuti uwane mukana wakazara weizvozvo, zvakadaro, zvakakosha kuti unzwisise zviri kuitika kuseri kwezviitiko. Heano mazano mashanu nemaitiro anozoita kuti iwe ushandise Optimizely kugona senge pro.
Sarudzo # 1: Nzwisisa Kuti Haasi ese Metriki Akagadzirwa Akaenzana
Mune maturusi mazhinji ekuyedza, nyaya inowanzo kufuratirwa ndeyekuti iyo metriki iwe yaunowedzera uye yekuteedzera sechikamu cheyedzo yako, ndipo paunonyanya kuona mhedziso dzisina kukodzera nekuda kwemukana wakasarudzika (muhuwandu, iyi inonzi "dambudziko rekuyedza rakawanda." "). Kuti uchengete zvawanikwa zvivimbike, Optimizely inoshandisa nhevedzano yekudzora uye kugadzirisa kuitira kuti mikana yezvinoitika ive yakaderera sezvinobvira.
Iwo maratidziro uye kugadziridzwa zvine zvazvinoreva zviviri kana iwe ukaenda kumisikidza bvunzo muOptimizely. Kutanga, iyo metric iwe yaunosarudza seyako Primary Metric inosvika pakuverengera kukosha nekukurumidza, zvimwe zvese zvinhu zvinogara zvakadaro. Chechipiri, iyo yakawanda metric iwe yaunowedzera kune yekuyedza, iyo yakareba ako ekupedzisira metric anotora kusvika kune huwandu hwehuwandu.
Paunenge uchironga kuyedza, ita shuwa kuti iwe unoziva kuti metric ipi ichave yako Yechokwadi kuchamhembe mune yako sarudzo yekuita maitiro, ita izvozvo chako Chekutanga Metric. Wadaro, chengetedza iyo yakasara yeako metric rondedzero yakatetepa nekubvisa chero chinhu chakanyanya kuwanda kana tangential.
Sarudzo # 2: Gadzira Yako Yako Tsika Hunhu
Optimizely yakanaka pakukupa iwe dzinoverengeka dzinonakidza uye nzira dzinobatsira dzekutangisa yako miedzo miedzo. Semuenzaniso, unogona kuongorora kuti mamwe marapirwo anoita zvirinani pane desktop vs. nhare, kana kuona misiyano munzvimbo dzinowanikwa traffic. Sezvo chirongwa chako chekuyedza chinokura zvakadaro, iwe uchakurumidza kushuvira zvikamu zvitsva - izvi zvinogona kuve zvakanangana neako mashandisiro kesi, sezvikamu zveimwe-nguva kana kutenga kunyoreswa, kana zvakajairika se "vatsva vs. vanodzoka vashanyi" (izvo, kutaura chokwadi, isu hatigone kuziva kuti nei izvo zvisina kupihwa kunze kwebhokisi).
Sarudzo # 3: Ongorora Optimizely's Stats Accelerator
Imwe inowanzo-yakapfuurwa yekuyedza chishandiso kugona kushandisa "akawanda-akashongedzerwa makororo", mhando yemuchina yekudzidza algorithm iyo inoshanduka zvine simba uko traffic yako yakapihwa pamusoro penzira yekuyedza, kutumira vashanyi vakawanda ku "kuhwina" kusiyanisa sezvinobvira. Iyo nyaya ine akawanda-akapamba makororo ndeyekuti mhedzisiro yavo haisi zviratidzo zvinovimbika zvekuita kwenguva refu, saka kesi yekushandisa yemhando idzi dzekuyedza inogumira kumatare anotora nguva sekushambadzira kwekutengesa.
Optimizely, hazvo, ine imwe mhando yemabhanditi algorithm anowanikwa kune vashandisi pazvirongwa zvepamusoro - Stats Accelerator (yava kunzi "Yekukurumidza Kudzidza" sarudzo mukati meVapambi). Mune ino setup, pachinzvimbo chekuyedza kugovera zvine simba mushanduro kune iyo yepamusoro-kuita musiyano, Optimizely zvine simba inogovera traffic kune iyo misiyano inogona kusvika kuhuwandu hwehuwandu nekukurumidza. Nenzira iyi, iwe unogona kudzidza nekukurumidza, uye nekuchengetedza iko kungoita kweyakajairwa A / B mhedzisiro bvunzo.
Sarudzo # 4: Wedzera Emojis kuMazita Ako Emetriki
Pakutanga kuona, iyi pfungwa ingangonzwika isiri yenzvimbo, kunyangwe iri mukati. Nekudaro, chakakosha chikamu chekuona kuti uri kuverenga chaiyo mhedzisiro mhedzisiro inotanga pakuva nechokwadi chekuti vateereri vako vanokwanisa kunzwisisa mubvunzo.
Dzimwe nguva kunyangwe isu tichiedza zvakanyanya, mazita emetric anogona kuvhiringidza (mira - iwo moto wemetriki kana odha ichigamuchirwa, kana kana mushandisi akarova peji rekutenda? peji rinotungamira mukuziva kwakazara kuwanda.
Kuwedzera emojis kumazita emametric (zvinangwa, greenmarkmark, kunyangwe hombodo hombe yemari inogona kushanda) zvinogona kuguma nemapeji ari akatemerwa zvakanyanya.
Vimba nesu - kuverenga kunze mhedzisiro kunonzwa kuve nyore.
Sarudzo # 5: Dzokorora zvakare Yako Statistical Kukosha Chikamu
Mhedzisiro inoonekwa seyakajeka mune yekuyedza Optimizely kana vasvika nhamba inokosha. Statistical kukosha izita rakaoma remasvomhu, asi zvirinani mukana wekuti maonero ako ndiwo mhedzisiro yemusiyano chaiwo pakati pevaviri, uye kwete mukana wakangoitikawo.
Optimizely yakashumwa manhamba ekukosha kwematanho "anogara achishanda" nekuda kwechirevo chemasvomhu chinonzi kuteedzana kuyedzwa - izvi chaizvo zvinoita kuti zvivimbike zvakanyanya kupfuura izvo zvezvimwe zvekushandisa zvekuyedza, izvo zvinowanzoitika kune ese marudzi e "peeking" nyaya kana iwe ukaverenga navo nekukurumidza.
Izvo zvakakodzera kuti utarise kuti ndeupi mwero wehuwandu hwehuwandu hwaunofunga kuti hwakakosha kuchirongwa chako chekuyedza. Kunyange 95% iri musangano munharaunda yesainzi, tiri kuyedza webhusaiti shanduko, kwete majekiseni. Imwe sarudzo yakajairika munyika yekuyedza: 90%. Asi iwe urikutambira here kugamuchira kushomeka kushoma kuitira kuti umhanye kuedza nekukurumidza uye kuyedza imwe pfungwa? Iwe unogona kunge uri kushandisa 85% kana kunyangwe 80% kuwanda kukosha? Kuva nechinangwa pamusoro penjodzi yako-mubairo muyero unogona kubhadhara zvakawandisa zvikwereti nekufamba kwenguva, saka funga izvi kuburikidza nokungwarira.
Verenga Zvimwe Nezve Optimizely Intelligence Cloud
Aya mashanu akurumidze misimboti uye nzwisiso zvichave zvisingaite kubatsira kuchengetedza mupfungwa iwe uchishandisa Optimizely. Sezvo nechinhu chero chishandiso, chinovira kuti uve nechokwadi chekuti iwe unonzwisisa kwese kwese kumashure-kwe-zviitiko zvigadziriso, kuti iwe ugone kuve nechokwadi kuti uri kushandisa chishandiso zvakanaka uye zvinobudirira. Nekunzwisisa uku, iwe unogona kuwana mhedzisiro mhedzisiro yauri kutsvaga, kana iwe uchiida.
Tags: hunhutsika hunhuemojiekisiperimendimetricsoptimizelyOptimizely huchenjeri gorechikuru metricmetrics ekutangakuteedzana kuyedzwanhamba inokoshastats acceleratoryokuedzwakuyedza hunhukuyedza metricwebhu kuyedza
Usati wajoinha Cro Metrics, akapa yakazara-stack kushambadzira sevhisi inomhanya yakabudirira kuyedza chirongwa seMushambadziro Director kuBig Kubvunzana. Ryan anounza ziso rakajeka rezano, nzwisiso yakadzama yevashandisi psychology, uye nehunyanzvi hwekugadzira kugadzirisa kune iyo Cro Metrics timu.